ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အဏုဇီဝဗေဒ 🔬🔬 ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာ
ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​တွင် အဏုဇီဝ​ဗေဒ ဘာသာရပ်​ ပထမနှစ်​(ထူးချွန်​) သင်​တန်​းများကို
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်​နှစ်​မှ စတင်​ဖွင်​့လှစ်​ခဲ့ပါသည်​။
အဏုဇီဝဗေဒ​ ပထမနှစ်​(ထူးချွန်​) သင်​တန်​း တက်​​ရောက်​ရန်​အတွက်​ အနိမ့်ဆုံး စုစု​ပေါင်​းရမှတ်​ ၄၀၀ (ဇီဝ​ဗေဒ ဂုဏ်​ထူး) ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဏုဇီဝဗေဒ (Microbiology)ဘာသာရပ်သည် သာမန်မျက်လုံးဖြင့် မမြင်နိုင်သည့် အဏုကြည့် မှန်ပြောင်းအောက်မှာ မြင်နိုင်တဲ့ သက်ရှိများ microorganisms များအကြောင်းကို လေ့လာသည့် ဘာသာရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
အဏုဇီဝပိုးများတွင် မှို (microscopic fungi)၊ ရေညှိ (microscopic algae)၊ စိမ်းပြာရေညှိ(cyanobacteria)၊ ဘက်တီးရီးယား (bacteria)၊ ဗိုင်းရပ်(စ်) viruses များ ပါဝင်ပါသည်။
လူကို အကျိုးပြုတဲ့ အဏုဇီဝ၊ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အဏုဇီဝ၊
လူကို အကျိုးလည်းမပြု ရောဂါလည်းမပေး၊ သူ့ဟာသူနေတဲ့ အဏုဇီဝဆိုပြီး သုံးမျိုး သုံးစားခွဲခြားထား ပါတယ်။
အကျိုးပြု အဏုဇီဝပိုးများ ဆိုသည်မှာ အပင်များ၊ သက်ရှိများကို ကောင်းကျိုးပြုပေးသော အဏုဇီဝပိုးများ ဖြစ်သည်။
အဏုဇီဝ ရုပ်များအား လေ့လာပြီးနောက် ၎င်းအဏုဇီဝရုပ်များမှ မည်ကဲ့သို့ ဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ကိစ္စတွင် လည်းကောင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချနိုင်မည့် အကြောင်းများအား အဓိကထား သင်ကြားလျက်ရှိသည်။
Microbial Ecology, Soil Microbiology, Virology, Microbial Biochemistry,
Algae Microbiology, Microbial Evolution, Microbial Physiology,
Microbial Molecular Cell Biology ,
Microbial Genetics, Research Methodology, Fishery Microbiology,
Human Microbial Diseases, Causes and Control,
Agricultural Microbiology, Biostatistics,
Food and Dairy Microbiology,
Industrial Microbiology, Biophysics, Microbial fungi and their application, Medical and Veterinary Microbiology, Microbial diseases in Animals, Haematology and Blood Banking,
Microbial Nutrition Growth and Control, Microbial Enzymes and Its Application, Eutrophication and Freshwater Microorganisms,
DNA Technology and Genomics, Diagnostic Microbiology
BSc (Microbiology)နှင်​့ BSc (Hons.) Microbiology
MSc (Microbiology), PhD (Microbiology) တို့ဖြစ်​သည်​
BSc (Microbiology)ဘွဲ့ရရှိရန် စုစုပေါင်း ၄ နှစ်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး BSc (Hons.) Microbiology ဘွဲ့အတွက်
စုစုပေါင်း ၅ နှစ်တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်....
တက်ရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာ Scholarships နဲ့
Students Exchange programများအတွက်လည်း
အခွက့်အရေးများစွာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​ အဏုဇီဝဗေဒ (ရုက္ခ​ဗေဒဌာန) တွင်​
​ကျောင်​းသားဗဟိုပြု သင်​ကြားနည်​းစနစ်​ကို အသုံးပြုကာ Multimedia သင်​​ထောက်​ကူပစ္စည်​းများဖြစ်​သည်​့ Projector, Computer (Laptop), Speaker, TV,တို့ကို အသုံးပြု၍ Powerpoint presentationများ၊
Video animationsများဖြင့် ရှင်းလင်းပြသသင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။ Lecture rooms & Practical roomsတိုင်းတွင်​ Air-con များလည်း တပ်​ဆင်​ထားရှိပါသည်​။ထို့ပြင် ​ကျောင်​းသား​ကျောင်​းသူများ အင်​တာနက်​မှ တစ်​ဆင်​့ နိုင်​ငံတကာအဆင်​့မီ ပညာရပ်​များ ​လေ့လာသိရှိနိုင်​ရန်​ရည်​ရွယ်​၍လည်​း Wifiများ ထုတ်​လွှင်​့​ပေးထားပါသည်​။ လက်​​တွေ့ပြုလုပ်​ရာတွင်​လည်​း
ခေတ်မီ စက်​ပစ္စည်​းများ၊ microscopesများကို ​ကျောင်​းသူ​ကျောင်​းသား ကိုယ်​တိုင်​ ကိုင်တွယ် အသုံးပြု​စေ၍ ​လေ့ကျင်​့သင်​ကြား​ပေးလျက်​ရှိပါသည်​။ စာသင်နှစ်တစ်နှစ်ပြီးတိုင်း short tripနှင့် Long trip များ သွားရောက်လေ့လာစေခြင်းဖြင့်
သင်ကြားရေးတွင် ပိုမိုထိရောက်လွယ်ကူမှု ရှိစေပါသည်။
အဏုဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိပြီးသည့်အခါတွင် မိမိ၏
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း၊ ဘာသာရပ်စိတ်ဝင်စားမှု၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတို့အပေါ် မူတည်၍
FAME Pharmaceuticals၊ စား​သောက်​ကုန် လုပ်ငန်းများ၊ ဆေးဝါး၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ Companyများတွင် အရည်အသွေး စမ်းသပ်သည့် နေရာ Quality Controls
များ၌သာမက ရောဂါရှာဖွေရေး၊ ဆေးသုတေသန၊ ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပဋိဇီဝဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ်ရေး၊ FDA အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး၊ ဓာတ်ခွဲခန်းပညာရှင် Lab. Technicians အစရှိသဖြင့် နယ်ပယ်စုံတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှလည်း
ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးလုပ်ငန်းစက်ရုံများတွင် အဏုဇီဝဗေဒ ဘွဲ့ရများအတွက် ရာထူးနေရာများလည်း ခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်။
မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ MSc ရရှိပြီးပါက တက္ကသိုလ်များတွင် နည်းပြ/သရုပ်ပြ (Tutor/ Demonstrator) များအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ကာ သုတေသနများဆက်လက်ပြုလုပ်ပြီး မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များကို ပညာများပြန်လည်ဝေမျှနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အဏုဇီဝဗေဒဘာသာရပ်တွင် လက်ရှိတက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေသည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၄၀ ကျော် ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး
၎င်းတ်ို် ့၏ အနိမ့်ဆုံး ဝင်ခွင့်အမှတ်မှာ ၄၀၀ ဖြစ်ပြီး အမှတ် ၄၀၈ မှ ၄၉၇ မှတ်​အတွင်း ရရှိသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ရောက်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။